Hassan al-Kontar oo Suuriya u dhashay wuxuu Toddobo bilood ku dhex noolaa garoonka diyaaradaha ee Kuala Lumpur International Airport. |
Hassan al-Kontar oo Suuriya u dhashay wuxuu Toddobo bilood ku dhex noolaa garoonka diyaaradaha ee Kuala Lumpur International Airport.
Hassan al-Kontar oo Suuriya u dhashay wuxuu Toddobo bilood ku dhex noolaa garoonka diyaaradaha ee Kuala Lumpur International Airport
Nin u dhashay dalka Suuriya oo ku dhawaad toddobo bilood ku noolaa garoon diyaaradeed oo kuyaal dalka Malaysia ayaa laga saaray garoonkaas loona wareejiyey gacanta booliiska, sida ay sheegeen saraakiisha dalkaas.
Warbaahinta ayaa soo ifbixisay xaaladda Hassan al-Kontar kadib markii ay soo baxday in uu ku noolyahay garoonka diyaaradaha ee Kuala Lumpur International Airport.
Wuxuu isaga soo tagay dalka Suuriya si uu uga dheeraado shaqada ciidanka ee khasabka ah markii uu dagaalku ka qarxay dalkaasna, wuu diiday in uu ku laabto dalkiisii hooyo.
Hase ahaatee afhayeen ayaa BBC-da talaadadii u sheegay in Mr Kontar aanu sii daganaan doonin garoonka.
Madaxa socdaalka dalka Malaysia ayaa arrintan xaqiijiyey, asagoo warbaahinta maxalliga ah u sheegay in masuuliyiinta ay la shaqaynayaan booliiska Malaysia.
Said Mustafa Ali ayaa sheegay in ” Meesha dadka rakaabka ah ay diyaaradda ku sugaan loogu talagalay in ay ku nastaan oo kadib ay diyaaradooda raacaan balse ninkaan aanu sidaasi samayn. Wuxuu deegaan ka dhigtay meel mamnuuc ah waana in aan ka qaadnaa tallaabada ku habboon,”
Wuxuu intaas ku daray in ninkaan dalka Suuriya u dhashay ay u gudbin doonaan “Waaxda socdaalka” wixii ka dambeeya markii ay booliisku su,aalo waydiiyaan. “Intaas kadib waxaan la xidhiidhi doonnaa safaaradda Suuriya si ay u fududayso in ninkaan loo tarxiilo dalkiisii hooyo”
Majirto faahfaahin intaas dheer oo la bixiyey walina ma cadda waxa ka dhalan kara kasaaritaanka garoonka ee Mr al-Kontar iyo xidhitaankiisa labadaba.
Lama oga ilaa iyo hadda meel uu ku sugan yahay. Xidhiidh la damcay in lagala sameeyo WhatsApp-ka laguma guulaysan.
Mr al-Kontar waxa uu ka shaqayn jiray caymiska dalka Isutagga Imaaraadka carabta markii uu dagaalku ka qarxay Suuriya sanadkii 2011.
Ma aanu cusboonaysiisan Karin baasaboorkiisa sabatoo ah ma aanu soo dhammaysan tababarka ciidanka ee dalkiisa hooyo, balse ma uu doonayo in uu dib ugu laabto, cabsi uu ka qabo in la xiro ma lagu daro ciidamada militariga awgeed.
Sidaas darteed wuxuu sharci darro ku joogay Imaaraadka, balse waxaa la xiray sanadkii 2016-kii.
Sanadkii 2017 wuxuu farsamaystay sidii uu u heli lahaa baasaboor cusub, balse waxaa markii dambe loo tarxiilay dalka Malaysia. Oo kamid ah dalalka fara ku tiriska ah ee caalamka oo dhan dadka reer Suuriya ay tagi karaan dal ku gal la’aan. Waxaana markuu halkaas tagay la siiyey saddex bilood oo dal ku gal dalxiis ah.
Markii uu dal ku galkaasi ka dhacay ayuu iskudayey in uu aado dalka Turkiga balse waxaa loo diiday in uu halkaas diyaarad u raaco. Wuxuu aaday dalka Cambodia balse dib ayaa loo soo celiyey, wixii intaas ka dambeeyey wuxuu ku noolaa meel yar oo kamid ah garoonka oo dadka safarka ah ay ku hakadaan, asagoo ku noolaa cuntada ay siiyaan shaqaalaha diyaaradaha.
36 jirkaan kasoo jeeda magaalada Suweida, oo kutaal Koonfurka magaalada Damascus, waxa uu magangelyo ka dalbaday dalalka Ecuador iyo Cambodia, balse kuma aanu guulaysan iskudaygiisii.
Waxa uu si joogto ah baraha bulshada usoo galinayey halka uu kunool yahay. Wixii ugu dambeeyey ee uu soo galiyo ayaa ahaa sawirro muujinaya halka uu ku nool yahay.